Madaxweynaha dalka oo baaq u diray shacabka – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha dalka oo baaq u diray shacabka
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa baaq la xiriirta nabada iyo xasiloonida u diray shacabka ka hor iyo kadib dsoorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo bisha 8-aad ee 2017-ka.
Baaqaasi ayaa waxa uu u sheegay dadweynaha in siyaasiyiinta aysan caqliga ka xadin islamarkaana cadaawad iyo xasilooni daro dhexdooda dhigin maadama siyaasiyiinta ay iyaga mar walbo kulan wada yeeshen oo ay hal meel kuwada kaftamaan.
Madaxweynaha ayaa arintaasi tusaale u soo qaatay in isaga iyo Raila Odinga oo tartan weyn u ka dhaxeeyo ay wada joogen xiligii u bax dhigii loo sameynayay Madaxweynihii hore ee dalka Mzee Jomo Kenyatta.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli dalka u ku soo dhawaanayo doorashada guud waxayna sidoo kale ku begmeysa xilli siyaasiyiinta qaar lagu eedeynayo in ay jeedinayaan hadalo qalafsan oo naceyb hurin karo.
← Musalia mudavadi oo ku eedeyay Gavanayaasha dalka in ay ku guuldaresteen hormarinta iyo meel ka gaarida dowlad goboledyada
Heshiis taarikhi ah oo dhex-marey Colombia iyo Jabhadda FARC →